Saturday December 27, 2014 - 17:52:53 in Wararka by
Waa Alle mahadiis iyo dhammaan intii ka qeyb qaadatay in Magaalada Muqdisho ka joojisay rasaastii iyo madaafiicdii ka dhaceysay, waxaa kale oo mudan in iyana loo mahad celiyo inta hadda ku howlan sidii magaalada Muqdisho bilicdeeda ay dib ugu soo noq
Muddo ka badan saddex sano magaalada Muqdisho waxaa ku socda howlo dib u dhis ah oo doorka ugu weyn ay ka qaadanayaan shirkado laga leeyahay wadanka Turkiga, inkasta oo weli aan la oran karin 20% way soo noqotay bilicdii magaalada Muqdisho.
Cabirka aan ka sameeyay bilicda Muqdisho oo dib u soo laabatay runtii ma rumeysan kartid haddii aadan joogin magaalada Muqdisho, bacdamaa aad horay u aragtay ama u akhrisatay warar kala duwan oo horay looga tebiyay Muqdisho oo dib u soo kabatay lana soo baxday quruxdii ay horay u lahayd.
Waxaa nasiib darro ah isla markaana Soomaalidu caado ka dhigatay faafinta wararka qiyaaliga ah ee lagu marin habaabinayo shacabka aan xog-ogaalka ahayn xaaladda dalkooda, bacdamaa muddo dhowr ah sano ay dalka ka maqan yihiin.
Bilicda magaalada Muqdisho oo dib u soo kabaneysa, waa run marka laga eego guryaha iyo dabaqyada dhaadheer ee laga taagay waddooyinka hareerahooda, balse aan lahayn waddo loo soo maro, bacdamaa ay weli dhaawacyadii dagaalada sokeeye ka muuqdaan.
Magaalada Muqdisho oo aad u baaxad weyn ma aha hal waddo oo kaliya, waxaana tusaale kaaga filan burburka ka muuqda waddooyinka ku wareegsan xarunta madaxtooyada Villa Somalia, sida wadada ka timaada isgoyska Warta Nabadda, tan ka timaada suuqa Maana Boolyo iyo laba waddo kale ee ka kala yimaada Caga Dhiig, tan suuqa Bakaaraha ka timaada iyo waddooyin kale oo aan halkaan lagu soo koobi karin.
Haddii aad aragtay sawirka wadada ay Turkigu dayactireen ee hor marta Villa Somalia, micnaheedu ma ahan waddooyinka Muqdisho marka saddex loo dhigo hal dhig oo ka mid ah ayaa la dayactiray.
Mashruuca shirkadaha Turkiga ay ku qaateen lacagta faraha badan ee loogu talo galay dib u dhiska dalka Soomaaliya ay ku deeqeen wadamada caalamka runtii waxaa la oran karaa waa mashruuc laga weeciyay sidii loogu talo galay, taasi oo muujineysa sida ay ku socdaan howlahaasi waxtarka u leh dalka iyo dadka.
Dayactirka wadada dheer ee ka timaada Garoonka diyaaradaha ilaa Baar Fiat ayaa ka mid ah meelaha ay ka howl galeen shirkadaha Turkiga, waxaana ilaa iyo iminka ka taagan dhibaatooyin ay ku qabaan gawaarida isticmaasha, gaar ahaan xilliyada roobka oo biyo fara badan ay fariisanayaan, bacdamaa aan loo sameynin tubooyinkii biyaha qaadayay.
Taas meel ii dhig, waxaaba kaaga sii daran inay burbursan yihiin waddooyin muhiim ah oo ku yaala faras magaalaha Muqdisho sida isgoyska Ceel Gaabta, wadada degmooyinka C/Casiis, Shangaani, Wadada dheer ee isku xirta Balcad ilaa iyo Baar FIAT, Wadada wadnaha ee u dhaxeysa Isgoysyada Howl-wadaag ilaa iyo duleedka degmada Kaaraan.
Waddooyinka kale oo marka aad marto ku soo xusuusinaya xilligii dagaalada sokeeye waxaa ka mid ah isgoyska Siinaay, wadada Jan. Daa'uud, Isgoyska Towfiiq, Isgoyska Fagax, Isgoyska Blac Sea, Isgoyska Baar Ubax, wadada u dhaxeysa Warshadaha ilaa Stadium Muqdisho.
Magaalada Muqdisho bilicdeeda oo dib u soo laabatay waa faanoole fari kama qodna, akhristow waxaase nasiib wanaag ah inay ka wanaagsan tahay sidii hore oo aanay jirin dagaallo sokeeye iyo kooxo iska xiranaya waddooyinka iyo dagaal beeleedyadii horay uga dhici jiray.
Dowladda Turkiga shirkadaheeda u soo shaqo tegay dalkaan burbursan waxay wadaan QAWDA MAQASHII WAXNA HA U QABAN, mana aha wax caqliga wanaagsani uu qaadan karo in la yiraahdo Muqdisho bilicdeeda dib ayay u soo noqotay iyadoo weli burbur xoogan uu ka muuqdo waddooyinkii faras magaalaha ahaa, iskaba daa Muqdisho inteeda kalee.
Ugu dambeyntii akhristow daawo sawirada muujinaya burburka, kuwaasi oo qaarkood markaad aragto caddeyn u ah in waxqabadka shirkadaha Turkiga aanu weli gaarin heer bilow ah, waxayna dadka Muqdisho si cad u arkeen in mashruuca dayacyirka waddooyinka ay shirkadaha Turkigu ka eegteen dantooda oo kaliya bacdamaa waddooyinka ay dayactireen ay isticmaalaan gawaaridooda.